ပဲဖြစ်ဖြစ်အမှန်တရားသုံးသပ်စိစစ် Untruth ထက် သာ. ကောင်း၏ Is
နစ်ရှေး, အမှန်တရားနှင့် Untruth
အမှန်တရား Untruth ထက် သာ. ကောင်း၏ရှိမရှိအကဲဖြတ်
untruth မေလ, တကယ်တော့, အမှန်တရားမှပိုကောင်းတယ်ဖြစ်ကြောင်း - မုသာကျော် untruth, အဖြစ်မှန်ကျော်အမှန်တရား၏အားသာချက်များကြောင့်မည်သူမဆိုပင်ဆန့်ကျင်ဘက်အကြံပြုအများကြီးလျော့နည်း, ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုထဲသို့ဆွဲလိမ့်မယ်လို့ကူးပုံရသည်ဒါကြောင့်သိသာပေါ်လာပါသည်။ သို့သော်ဂျာမန်အတွေးအခေါ်ပညာရှင်ရုံကားအဘယ်သို့ တွင် Friedrich နစ်ရှေး ခဲ့တယျ - ကျနော်တို့သာမန်အားဖြင့်ယူဆသကဲ့သို့ဖြစ်ကောင်းအမှန်တရား၏အားသာချက်များအဖြစ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်း-ဖြတ်မရှိကြပေ။
အမှန်တရား၏သဘောသဘာဝသို့နစ်ရှေးရဲ့ delving နှင့်အတူယဉ်ကျေးမှုနှင့်လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ရှုထောင့်အမျိုးမျိုး၏စာရင်းဝင်သို့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေအပေါ်သူ့ကို ယူ. တစ်ခုခြုံငုံအစီအစဉ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်ဖြစ်ခဲ့သည် ကငျြ့တရား ကိုယ်ကျင့်တရား၏စာရင်းဝင် (1887) တွင်သူ့စာအုပ်နှင့်အတူအကျော်ကြားဆုံးအကြားဖြစ်ခြင်း။
နစ်ရှေးရဲ့ရည်မှန်းချက်ပိုကောင်းခေတ်သစ်လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက်ခွင့်ပြုခဲ့ခြင်းနှင့်အားဖြင့်ထိုလုပ်ငန်းစဉ်အတွက်သူများအချက်အလက်များများပိုကောင်းတဲ့နားလည်မှုအောင်မြင်ရန်အဘို့ကိုယူ "အချက်အလက်များ" (စသည်တို့ကို, လူမှုရေး, ကိုယ်ကျင့်တရား, ယဉ်ကျေးမှု) ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုနားလည်ရန်ဖြစ်ခဲ့သည်။
အဘယျမေးခှနျးမြားငါတို့ရှေ့မှာအမှန်တရားအားဤအလိုတော်ကိုမချထားပါတယ် - နေတုန်းပဲ, များစွာသောအကျိုးတူအပေါင်းတို့, ဒဿနပညာရှင်ယခုအချိန်အထိလေးစားမှုနှင့်အတူပြောပြီသောကြောင့်ကျော်ကြားနျကနျကွောငျးဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုစုံစမျးလတံ့သောသမ္မာတရားအလိုတော်! အဘယ်အရာကိုထူးဆန်း, မတရားသောမေးခွန်းထုတ်စရာမေးခွန်းများကို! ဒါကပင်ယခုရှည်ဇာတ်လမ်းဖြစ်ပါသည် - ကခဲစတင်ခဲ့လျှင်အဖြစ်သေးပါကပုံရသည်။ ဒါကြောင့်ကျနော်တို့နောက်ဆုံးတော့သံသယဖြစ်ဖွယ်ဖြစ်လာသည်းခံခြင်းဆုံးရှုံးများနှင့်စိတ်မရှည်လွှဲသင့်ကြောင်းဆိုသည်အံ့ဩလား? ကျနော်တို့နောက်ဆုံးတော့ဒီကနေလေ့လာသင်ယူသင့်ကြောင်း Sphinx လည်းမေးခွန်းများမေးသလော
ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကိုမေးခွန်းများကိုတတ်၏အမှန်တကယ်ကားအဘယ်သူနည်း ကိုယ့်ကို "အမှန်တရား" လိုလားကဘာလဲ? "
"တကယ်တော့ဒီအလိုတော်များ၏အကြောင်းရင်းနှင့် ပတ်သက်. မေးခွန်းမှာရှည်လျားရပ်တန့်သို့ရောက် လာ. - ငါတို့သည်နောက်ဆုံးတွင်နေဆဲပိုပြီးအခြေခံမေးခွန်းတစ်ခုကိုရှေ့တော်၌ပြည့်စုံရပ်တန့်သို့မရောက်မှီတိုင်အောင်ငါတို့သည်ဤအလိုတော်၏တန်ဖိုးအကြောင်းမေးကျနော်တို့အမှန်တရားချင်ဆိုပါစို့: အဘယ်ကြောင့်မပေးမဟုတ်ဘဲ။ ။ untruth လောနဲ့မသေချာမရေရာ? ပင်အဝိဇ္ဇာ? "
နစ်ရှေးကိုဒီမှာထုတ်ညွှန်ပြနေသည်ကဘာလဲဒဿနပညာရှင် '(နှင့်သိပ္ပံပညာရှင်များ') အစား untruth, မရေရာ၏အမှန်တရား, ဧကန်အမှန်နှင့်အသိပညာအဘို့အလိုဆန္ဒနှင့်အဝိဇ္ဇာကိုအခြေခံ, လုံးလုံးလြားလြားဝုဏ်ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သျောလညျးပဲသူတို့လုံးလုံးလြားလြားကြောင့်သူတို့ခဲ့ကြကြောင်းလည်းဖြစ်ကြောင်းမဆိုလိုပါ။ နစ်ရှေးအဘို့, ထိုကဲ့သို့သောမေးမြန်း၏စမှတ်တို့၏ "သမ္မာတရားအလိုတော်" သူ့ဟာသူ၏စာရင်းဝင်ဖြစ်ပါတယ်။
အဘယ်မှာနစ်ရှေး "သမ္မာတရားအလိုတော်" "မည်သည့်စျေးနှုန်းမှာအမှန်တရား" များအတွက်အလိုဆန္ဒကဒီ၏မူလအစနေရာချထားသနည်း? နစ်ရှေးသည်အမှန်တရားနှင့်ဘုရားသခငျသညျအကြားဆက်သွယ်မှုအတွက်တည်ရှိသည်: ဒဿနပညာရှင်တစ်ဦးသို့ဝယ်ကြပါပြီ ဘာသာရေး သူတို့ကိုအမှန်တရားသူတို့၏ဘုရားသခင်အောင်, အမှန်တရားများအတွက်မျက်စိကန်းကိုကိုးကားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေသည့်စံပြ။ သူကကိုယ်ကျင့်တရား၏စာရင်းဝင်, III ကို, 25 ခုနှစ်တွင်ရေးသားခဲ့သည်အဖြစ်:
"အသိပညာ၏ Idealist ဖိအားပေးသောကြောင့်အမှန်တရားဤခြွင်းချက်မရှိအလိုတော်ပင်တစ်ဦးသတိလစ်ရအရေးကြီးသောအဖြစ်လျှင်ကုန်စံပြသူ့ဟာသူ၌ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်ပါသည် - အကြောင်းလှည့်ဖြားခြင်းကိုခံရကြဘူး - ကအဆုံးမရှိတဲ့တန်ဖိုးအမှန်တရားရဲ့ absolute value ၌ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်ပါသည်, (ကရပ်တည်သို့မဟုတ်ဤစံပြနှင့်အတူကျရောက်) တစ်ဦးတည်းကဒီစံပြနေဖြင့်ပိတ်ဆို့အရေးယူများနှင့်အာမခံ။ "
နစ်ရှေးအရှင်၏ဘုရားသခင်ကဲ့သို့အမှန်တရား, စောဒကတက်သည် ပလေတို "ဒီနေ့၏အသိပညာ၏ကျနော်တို့ယောက်ျား, ငါတို့ယောက်ျားနဲ့ anti-metaphysicians အဓမ္မကျနော်တို့လည်းဆဲကနေကျွန်တော်တို့ရဲ့မီးလျှံရရှိ: နှင့်အစဉ်အလာခရစ်ယာန်ဘာသာ, အမြင့်ဆုံးနှင့်အပါဆုံးပြီးပြည့်စုံသောစိတျကူးဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါသည် ဒီအမှန်တရားဘုရားသခငျ့ဖြစ်ပါသည်, ဘုရားသခငျသညျအမှနျတရားကြောင်းကိုလည်းပလေတိုရဲ့သောဟောင်းတစ်ဦး, ယုံကြည်ခြင်းအားထောင်စုနှစ်, ခရစ်ယာန်ယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်မီး။ " (ဂေးသိပ္ပံ, 344)
အခုတော့ဒီအနစ်ရှေးပျောက်ယခုဘဝမှသည်နှင့်အချို့သောလောကီ-သည်အခြားနှင့်ချက်များမရရှိဘုံဦးတည်လူ့အဘိုးပြတ်လှည့်အရာတစုံတခုကိုမျှတစ်ဦးကြီးများပြိုင်ဘက်ခဲ့ကြောင်း မှလွဲ. ထိုကဲ့သို့သောပြဿနာတစ်ခုမဖြစ်ပေလိမ့်မည်။ သူ့အဘို့, အပြောင်းအရွေ့၏ဤမျိုးသေချာပေါက်လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်နှင့်လူ့ဘဝလျော့နှင့်အရှင်သူအမှန်တရား၏ဤ apotheosis မခံနိုင်သောဖြစ်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒီအတော်လေးသဘာဝအမှန်တရား၏တန်ဖိုးတစ်ခုကိုရရှိနိုင်မည်, ရှိသမျှပြီးနောက်, ကောင်းသည်ကိုလူအပေါင်းတို့၏အထွတ်မှာအမှန်တရားအားမရနဲ့ကအားလုံးကိုတိုင်းတာရမည်ဖြစ်သည့်ဆန့်ကျင်စံအောင်အားဖြင့် - သူလည်းတစ်ခုလုံးကိုစီမံကိန်း၏မြို့ပတ်ရထားမှာမကျေမနပ်ဖြစ်လာကြပါပြီဟန် သူ့ဟာသူအမြဲစိတ်ချပါမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်မေးခွန်းထုတ်ခံရဘူး။
ဒါဟာတဦးတည်းကိုထိရောက်စွာ untruth ဦးစားပေးမည်ဖြစ်ကြောင်းငြင်းခုန်ခြင်းနှင့်အရွယ်အစားဆင်းအမှန်တရား၏သံဖြူဘုရားဖြတ်မယ်ရှိမရှိမေးခွန်းထုတ်ဖို့သူ့ကိုဦးဆောင်ခဲ့သည်။ အချို့သောအားလုံးမှာအမှန်တရားဆိုတန်ဖိုးကိုသို့မဟုတ်အဓိပ္ပာယ်ကိုငြင်းပယ်ရန်, ယုံကြည်ဖို့ဦးဆောင်ခဲ့ကြသကဲ့သို့မိမိရည်ရွယ်ချက်, မဟုတ်ခဲ့ပေ။
ဒါကကိုယ်နှိုက်အဖြစ်ကောင်းစွာတဲ့မြို့ပတ်ရထားအငြင်းအခုံဖြစ်လိမ့်မယ် - ကျွန်တော်စစ်မှန်သောကြေညာချက်ကြောင့် untruth အမှန်တရားမှပိုကောင်းတယ်ကြောင်းယုံကြည်လျှင်, ကျွန်တော်သေချာပေါက်ကျနော်တို့ယုံကြည်ရာ၏နောက်ဆုံး arbiter အဖြစ်အမှန်တရားကိုအသုံးပြုပြီ။
အဘယ်သူမျှမ, နစ်ရှေးရဲ့အချက်ထက် ပို. သိမ်မွေ့ခြင်းနှင့်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းခဲ့ပါတယ်။ မိမိအပစ်မှတ်အမှန်တရားပေမယ့်ယုံကြည်ခြင်း, ကလှုံ့ဆော်ကြောင်းအထူးမျက်စိကန်းသောသူတို့သည်ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်မဟုတ်ခဲ့ "ကုန်စံပြ။ " ဒီဥပမာမှာ, သူဝေဖန်ခဲ့အမှန်တရားမှာမျက်စိကန်းသောယုံကြည်ခြင်းတရားကိုခဲ့ပါတယ်, ဒါပေမဲ့တခြားဖြစ်ရပ်အတွက်ကြောင့်ရိုးရာခရစ်ယာန်ကငျြ့တရား, စသည်တို့အတွက်ဘုရားသခင်၌မျက်စိကန်းသောယုံကြည်ခြင်းတရားကိုခဲ့ပါတယ် .:
အသိပညာ၏ "ကျနော်တို့က" လူ "တဖြည်းဖြည်းအမျိုးမျိုးယုံကြည်သူများအပေါ်ယုံကြည်မှုကင်းမဲ့ဖို့လာကြပြီကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်မှုများတဖြည်းဖြည်းအခြရှေးကာလမြား၏ပြောင်းပြန်လုပ်ကျွန်တော်တို့ကိုဆောင်ခဲ့တော်မူပြီ: တစ်ယုံကြည်ခြင်း၏အစွမ်းသတ္တိကိုကအရမ်းအဓိကပြသနေသည်နေရာတိုင်းမှာကျနော်တို့လူတယောက်အားနည်းချက်အခြ ။ ဆန္ဒပြပွဲများ, ယုံကြည်ရာ၏ပင်မဖြစ်နိုင်သော၏ကျွန်တော်တို့သည်လွန်းသောယုံကြည်ခြင်းသည်မငြင်းလိုပါဘူး "မင်္ဂလာရှိသောစေသည်": ငါတို့သည်ယုံကြည်ခြင်းအားဘာမှသက်သေထူကြောင်းငြင်းပယ်တိကျစွာအဘယ်ကြောင့်ဖြစ်ပါသည် - ဟုယုံကြည်သောကြောင့်ဆန့်ကျင်မင်္ဂလာတိုးပြီးသံသယကြောင့်ယုံကြည်ခြင်းခိုင်ခံ့; ။ လှည့်စား၏ (ကိုယ်ကျင့်တရား၏စာရင်းဝင်, 148) - က "အမှန်တရား" ကအချို့သောဖြစ်နိုင်ခြေတည်စေမြဲမြံစေပါဘူး
နစ်ရှေးသူတွေကိုသံသယဝါဒီများနှင့်အထူးသဖြင့်ဝေဖန်ခဲ့ပါတယ် ဘုရားမဲ့ဝါဒီ သည်အခြားဘာသာရပ်များအတွက်မဟုတ်ဘဲဒီတစ်ခုရှိ "ကုန်စံပြ" စွန့်ပစ်တော်မူပြီးမှအပေါ်မိမိတို့ကိုယ်ကို prided တဲ့သူ:
"ဒီတစျပွိုင့်အပေါ်ခြွင်းချက်မရှိနေသောယနေ့ nay-sayers နှင့်အပြင်ကလူ - ဉာဏသန့်ရှင်းမှုအပေါ်သူတို့၏ခိုင်မာသောရပ်တည်ချက်; ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်အရွယ်၏ဂုဏ်အသရေဖွဲ့စည်းသောဤသူသည်မာပြင်းထန်, abstinent, သူရဲကောင်းဝိညာဉျ; ဤအရာအလုံးစုံဖြူဖပ်ဖြူရောဘုရားမဲ့ဝါဒီ, Anti-ခရစ်ယာန်, immoralists စိတ်ဝိညာဉ်၏, nihilists ဤသံသယဝါဒီ, ephectics, herectics ... အသိပညာ၏ဤနောက်ဆုံး Idealist, အကြင်အတွင်းတစ်ဦးတည်းအသိပညာဆိုင်ရာယုံကြည်ချက်ကြောင့်အသက်ရှင်လျှက်ယနေ့နှင့်ကောင်းစွာ, - သူတို့ဆက်ဆက် "ဤသူတို့အဖြစ်လုံးဝလွတ်မြောက်တတ်နိုင်သမျှအတိုင်းကုန်စံပြအနေဖြင့်ဖြစ်ကြောင်းယုံကြည် အခမဲ့, အလွန်အခမဲ့ဝိညာဉ်များ "; သော်လည်းသူတို့သည်မိမိတို့ကိုယ်ကိုယနေ့က embody နှင့်ဖြစ်ကောင်းသူတို့တစ်ဦးတည်း [ ... ] သူတို့ဟာဝေးအခမဲ့ဝိညာဉ်များဖြစ်ခြင်းမှ: သူတို့နေဆဲအမှန်တရားမှာယုံကွညျခွငျးရှိဘို့ (ကိုယ်ကျင့်တရား III ၏စာရင်းဝင်: 24) ။ ။
ထို့ကြောင့်အမှန်တရား၏တန်ဖိုးမေးခွန်းထုတ်ဘယ်တော့မှအရာသည်သမ္မာတရားကိုယုံကြည်ခြင်းအားအမှန်တရား၏တန်ဖိုးသရုပ်ပြမရနိုင်ကြောင်း, နစ်ရှေးရန်, အကြံပြုနှင့်ဖြစ်ကောင်းမှားယွင်းသောဖြစ်ပါတယ်။ သူကစိုးရိမ်ပူပန်ခဲ့ကြသည်အားလုံးအမှန်တရားတည်ရှိမငြင်းခုန်ခဲ့လြှငျ, သူမှာထားခဲ့နိုင်ပေမယ့်သူကမရကိုပြု၏။ အဲဒီအစားသူကအချိန်များတွင်, untruth အမှန်ပင်ဘဝတစ်ဦးလိုအပ်သောအခွအေနေဖြစ်နိုင်သည်ကိုငြင်းခုန်ရန်လှုံ့ဆော်ပေး။ တစ်ဦးယုံကြည်မှုအယူမှားဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုတော့မဟုတ်ပါဘူးနှင့်အတိတ်ရှိလူများကစွန့်ခွာရန်အဘို့အအကြောင်းပြချက်မတော်မူပြီ အစား, ယုံကြည်ချက်သူတို့လူ့အသက်ကိုထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်တိုးမြှင့်များ၏ရည်မှန်းချက်များအစေခံခြင်းရှိမရှိအပေါ်မှာအခြေခံစွန့်ပစ်နေကြသည်:
"တစ်ဦးတရားဆုံးဖြတ်တော်မူမိစ္ဆာသေချာပေါက်စီရင်ရန်ကန့်ကွက်မဟုတ်ပါဘူး: ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘာသာစကားအသစ်ကိုဖြစ်ကောင်း strangest အသံကြောင့်ဒီမှာမေးစရာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကအသက်တာကို-တိုးတက်, အသက်ရှင်ခြင်း-ထိန်းသိမ်း, မျိုးစိတ်-ထိန်းသိမ်းသည်အဘယ်အရာအတိုင်းအတာအထိပင်မျိုးစိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ မွေးမြူ; နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အခြေခံသဘောထားကို (ဒြပ်တရားစီရင်ပိုင်တစ်ဦးပိုင်သော) အ falsest တရားစီရင်ပိုင်ချွင်းချက်မရှိ၏သက်သက်သာတီထွင်ကမ္ဘာကြီးဆန့်ကျင်အဖြစ်မှန်တိုင်းတာခြင်းမရှိဘဲ, ယုတ္တိဗေဒ၏အဖြစ်စစ်မှန်တဲ့ပေးအပ်မရှိဘဲပြောသောမုသာကြောင်းကိုအများဆုံးမရှိမဖြစ်ဖြစ်ကြောင်းအခိုင်အမာရန်ဖြစ်ပါသည် နှင့် Self-တူညီ, နံပါတ်အားဖွငျ့ကမ်ဘာ၏အစဉ်အမြဲမမှန်မကန်ပြုလုပ်မှုခြင်းမရှိဘဲ, လူသားတို့ကိုအသကျရှငျနိုင်ဘူး - ကြောင်းမမှန်သောတရားစီရင်ပိုင်စှနျ့လှတျဖို့ဘဝကိုစှနျ့လှတျဖို့ပါလိမ့်မယ်, အသက်ရှင်ခြင်းကိုငြင်းပယ်ပါလိမ့်မယ်ဘဝတစ်ခွအေနအေအဖြစ် untruth အသိအမှတ်မပြုရန်: စေသည်။ သေချာဖြစ်မည်ဟု, အန္တရာယ်များတဲ့ဖက်ရှင်အတွက်ဓလေ့ထုံးတမ်းတန်ဖိုးသဘောထားခုခံတွန်းလှန်ရန်ကိုဆိုလိုပါသည်; နှင့်လုပ်ငန်းများကောင်းသောဒုစရိုက်တဘက်, တစ်ဦးတည်းကြောင့်လုပ်ရပ်အသုံးပြုပုံဒါသောအရပ်တို့ကိုမသူ့ဟာသူလုပ်သည့်ဒဿနိကဗေဒ "။ (အပြင်ကောင်းမွန်သောနှင့်ဘေးဥပဒ်, 333)
ဒဿနမေးခွန်းများနစ်ရှေးရဲ့ချဉ်းကပ်မှုမပြုအတုအယောငျသောအရာကိုအနေဖြင့်မှန်သည်အဘယ်အရာကိုကွဲပြားခြားနားသွားအပေါ်မှာအခြေခံပေမယ့်အသက်ကိုအလိုမရှိ-ဖျက်ဆီးသောအရာကိုအနေဖြင့်ဘဝကို-တိုးမြှင့်ကားအဘယ်သို့လျှင်ကအမှန်တရားမှကြွလာသောအခါဒီတော့သောသူမူကားတစ်ဦး Relativistic ကြောင်းဆိုလိုဘဲနေရသနည်း : သူဘာလူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းကလူများသောအားဖြင့် "အမှန်တရား" ကိုပဌနာအဖြစ်မှန်ထက်လူမှုရေးစည်းဝေးကြီးများနှင့်အတူလုပ်ဖို့ကပိုရှိတယ်ဆိုတာငြင်းခုန်ဟန်ခဲ့ပါ
ထို့နောက်အမှန်တရားကဘာလဲ? ဥပစာစကား, metonyms နှင့်နတ်ဘုရားများ၏တစ်ဦးကမိုဘိုင်းစစ်တပ်: ကဗျာဆန်ဆန်နှင့်အပြောအဆိုလွှဲပြောင်း, ပိုမိုပြင်းထန်လာနှင့်အလှဆင်ခြင်း, သောတာရှည်အသုံးပြုမှုပြီးနောက်, fixed ခံရဖို့ကလူဟန်, Canon, နှင့် binding ခဲ့ကြရသောလူ့ဆက်ဆံရေးအတိုတစ်ပေါင်းလဒ်အတွက် ။ အမှန်တရားတွေကိုကျွန်တော်မေ့လျော့ကြပြီဖြစ်သောထင်ယောင်ထင်မှားထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်ကြ၏ - သူတို့အထဲကဟောင်းနွမ်းများနှင့် sensuous အင်အားညှစ်ပြီဖြစ်လာကြပြီဥပစာစကား, သူတို့ရဲ့ဖောင်းကြွကိုဆုံးရှုံးခဲ့ကြပြီးယခုသတ္တုအဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းနှင့်မဟုတ်တော့ဒင်္ဂါးပြားအဖြစ်ထားတဲ့ဒင်္ဂါးပြားဖြစ်ကြ၏။ ( "တစ်ခု Extramoral Sense သည်အတွက်တွင်အမှန်တရားနှင့်မုသာကို" 84)
အကြောင်း, သို့သော်သူကလူမှုရေးစညျးဝေးကွီးမြား၏ပြင်ပတွင်မည်သည့်အမှန်တရားတွေ၏တည်ရှိမှုငြင်းပယ်သူတစ်ဦးပြည့်စုံ Relativistic ခဲ့ကြောင်းမဆိုလိုပါ။ untruth တစ်ခါတစ်ရံဘဝတစ်ခွအေနအေကြောင်းငြင်းခုံအမှန်တရားတစ်ခါတစ်ရံလည်းဘဝတစ်ခွအေနအေကြောင်းဆိုလို။ ဒါဟာချောက်ထဲကစတင်ခဲ့သည်ဘယ်မှာ၏ "အမှန်တရား" ကို သိ. နှင့်ကြီးစွန်းအလွန်ဘဝ-တိုးမြှင့်နိုင်ငြင်းပါ!
နစ်ရှေး "စစ်မှန်သော" ဖြစ်ကြောင်းနှင့်အချို့ကိုပုံစံမွေးစားခဲ့ကြပုံပေါ်သောအရာ၏တည်ရှိမှုကိုလက်ခံ အမှန်တရား၏ပေးစာယူသီအိုရီ အရှင်ကောင်းစွာ Relativistic တပ်ပြင်ပတွင်သူ့ကိုအားမရ။ သူသည်အများသောသည်အခြားဒဿနပညာရှင်ကနေမတူဘယ်မှာသို့သော်သူသည်တန်ဖိုးမဆိုမျက်စိကန်းသောယုံကြည်ခြင်းတရားကိုစွန့်လွှတ်ခြင်းနှင့်ခပ်သိမ်းသောကာလအပေါင်းတို့နှင့်အခါသမယအတွက်အမှန်တရားများအတွက်လိုအပ်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ သူဟာအမှန်တရား၏တည်ရှိမှုသို့မဟုတ်တန်ဖိုးကိုမငြင်းခဲ့ပါဘူး, ဒါပေမယ့်သူကအမှန်တရားအမြဲတန်ဖိုးရှိသောသို့မဟုတ်ရရှိရန်လွယ်ကူသောကြောင်းသူဖြစ်ရမည်ငြင်းပယ်ခဲ့ပါဘူး။
တခါတရံကရက်စက်ကြမ်းကြုတ်စွာအမှန်တရားမသိဘဲဖြစ် သာ. ကောင်း၏, တခါတရံကမုသာနှင့်အတူအသက်ရှင်ဖို့ပိုပြီးလွယ်ကူသည်။ အမှုဖွစျနိုငျသမြှအတိုငျး, အမြဲဆင်းနေတဲ့တန်ဖိုးကတရားသဖြင့်စီရင်ရန်ကြွလာ: မဆိုအထူးသဖြင့်ဥပမာ untruth သို့မဟုတ်ဒုနျအလှနျကျော်အမှန်တရားရှိသည်ဖို့ပိုနှစ်သက်သငျသညျကိုတန်ဖိုးထားသောအရာကိုအကြောင်းကြေညာချက်ဖြစ်တယ်, ကြောင်းအမြဲအလွန်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးစေသည် - အအေးမိခြင်းနှင့်ရည်မှန်းချက်မဟုတ်, အခြို့သောကြောင့်ဖော်ကျူးဖို့ကြိုးစားအဖြစ်။
တစ်ဦး Radical ဘုရားသခင်မဲ့ဝါဒီကဘာလဲ?
Logic နှင့် Arguments ဖို့နိဒါန်း
PGA Tour Valero တက္ကဆက်ဖွင့်ပါ
အရွက်နှင့်အတူစက္ကူ Chromatography သလားလုပ်နည်း
မင်္ဂလာဆောင်အတွက်ထိပ်တန်း 10 Oldies သီချင်းများ
အဝါရောင်ဂျက်၏ဝိညာဉျရေးရာနှင့်ကုသမှု Properties ကို
Escuchad el သား triunfal (စပိန် '' Hark, ထိုသံတော်ဆင့်ကောင်းကင်တမန်အားသီချင်းဆို ')
အဆိုပါ Smithereens ၏ထိပ်တန်း '' 80s သီချင်းများ
Que es la greencard y က Que se debe ဖုံးကိုဓားရှည် sobre la tarjeta က de residencia
ဤတွင် Electron configuration နဲ့အတူ period table တွင် Download လုပ်နည်းင်
ဂျော့ခ်ျဘားနတ်ရှောရဲ့ဘဝနှင့် Play အကြောင်းအစာရှောင်အချက်အလက်
အဘယ်ကြောင့်ဒါကြောင့်အများစုက Selfie တပ်အမုန်းသလား?
သင်္ချာအတွက် attribute တွေ
Theresienstadt: အဆိုပါ "မော်ဒယ်" စုရုံးနေထိုင်ရာ
Juan Corona - တောခုတ်ဓားလူသတ်မှု
အီတလီကြိယာ conjugation: သုံးစွဲသူများ
ဘုံ Reef ဖလော်ရီဒါငါးနှင့်ကရစ်ဘီယံ
အမေရိကန်ဖက်ဒရယ်အစိုးရဓာတ်ဆီအခွန် 1933 ခုနှစ်မှစ.
ကြီးမြတ်တဲ့ကျောင်းသား Be 10 နည်းလမ်းများ
ဓာတုဗေဒအတွက်စမ်းသပ်မှားယွင်းနေသည် calculate ကိုရန်ကဘယ်လို
ဝက်ဝံ - အရိုးဆွစ်ဇာလန်ကြွေထည်